Fikarohana sy fampandrosoana |
Fotoana fandefasana: 09-22-2020
Ny fampiharana biolojika ny hidrogen dia tena andrasan'ny akademia noho ny fiarovana azy sy ny fahombiazany mety ho midadasika. Mbola betsaka ny olana manandanja eo amin'ny sehatry ny biolojia hidrogen izay mendrika hianarana. Mino aho fa amin'ny alalàn'ny fikarohana lalindalina kokoa dia ho kaonseritra ny olona ...Hamaky bebe kokoa »
Ny ekipan'ny AngelBiss dia mikasa ny hanao amin'ny hidrogen koa napetraka. Ny famolavolana departemanta R&D ho an'ny vokatra vaovao: mpamokatra hidrogen. Ny hidrogen dia karazan-tsolika mora mirehitra amin'ny fahiratan'ny olona. Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny mpikaroka dia nahita vokatra antioksida tokana tokana, sy ny fikarohana momba izany ...Hamaky bebe kokoa »
Ny ekipa AngelBiss koa dia mikasa ny hanao zavatra azota napetraka. Ny rafitry ny departemanta R&D ho an'ny vokatra vaovao: mpamokatra Nitrogen. Ny nitroka dia gazy tsy mitongilana, tsy misy poizina ary tsy misy fofona. Noho izany, ny azota dia be mpampiasa amin'ny entona miaro. Ny fampiharana ny azota dia koa iray amin'ny R&D directi ...Hamaky bebe kokoa »
Ny Departemantan'ny R&D AngelBiss izao dia mifantoka amin'ny fampandrosoana ny vokatra vaovao ary miezaka ny mamorona vokatra manana traikefa avo sy fampisehoana tsaratsara kokoa. Ho an'ny Masinina Suction Portable, AngelBiss izao dia mianatra ny famoronana tavoahangy roa, ho ampiasaina mety kokoa sy azo ampiasaina izy io. Ho an'ny AngelBiss 5L Oxy ...Hamaky bebe kokoa »